Izany Ingersoll Rand Sokiro rivotra compressor menaka natokana rivotra Separator mampihatra ny hiringiriny-tsara fitaratra fibre vokarina amin'ny American HV na Lydall Company. Izany dia natao mba hanala, fara fahakeliny, 99,9% ny vaporous mixtures solika avy amin'ny Compressed rivotra. Ankoatra izany, vao lasa singa roa-adhesive, izay avy amin'ny hery ambony firaiketam-po, dia ampiasaina mba hamela ny Separator hiasa ara-dalàna na dia ambany ny mari-pana ny ambony 120 ℃.
Koa, io karazana menaka rivotra Separator ivelany na mety ho nanamboatra-in karazana. Ary efa ho 20 taona ny orinasa mpamokatra entana traikefa, ny orinasa dia zatra an'arivony teknolojian'ny famokarana. Izany dia ny hoe isika, dia afaka hanatitra avo-kilasy OEM fanompoana. Isika ihany koa dia afaka mamaritra ny Separator ampiasaina ny visy rivotra compressor ny misy marika, ohatra, Atlas Copco, Sullair, Fusheng, Ampitahao, etc.
Izany vokatra Mampiasa fitaratra ny micron fibre mba hanavaka ny vaporous menaka avy amin'ny Compressed rivotra. Dia solika lehibe nilatsaka avy any amin'ny vaporous coalesced menaka ho voangony eo ambany vokany eo ny hery misintona. Farany, ny diloilo voangony kosa, dia hiverina ny menaka tsipika ny compressor. Momba izany, io fisarahana micron mampihena ny fanjifana solika compressor-manidina.
1. voalohany Saturation Pressure Drop: ≤0.02 MPa
2. Ny solika Content araka Tafasaraka: ≤5 ppm
3. Amin'ny tranga izay ny tsindry indray mitete efa tsy eo intsony noho 0.1MPa, ny solika dia azo ampiasaina Separator, fara fahakeliny 4.000 ora.
Fanamarihana: ny ambony masontsivana dia azo ambanin'ny fepetra ny laharana miasa tsindry sy ny naoty mikoriana. Afa-tsy, ny mari-pana ambony indrindra dia tsy mihoatra ny 120 ℃. Ary ny Dah menaka lubrication nitondra ny GB / T7631.9-1997 no ampiasaina. Talohan'ny ny fanavahana, ny diloilo tsy eto intsony afa-po noho ny 3000ppm.
22388045 APL 096 212
54720735 APL 135 177
54749247 APL 135 302/1
54595442 160 96 600 17
39831885 160 96 600 17
39831888 226 96 610 17
42545368 226 96 610 17
39751391 216 96 600 17
22242606 APL 135 302/1
92754688 230 96 600 17
39895610 150 96 600 20
22089551 150 96 600 20
92754696 267 96 600 17
39737473 253 96 600 22
92871326 253 96 600 22
46501073 253 96 600 22
42841239 355 96 613 22
39831904 355 96 613 22
36876472 355 96 613 22
42542928 355 96 613 22
39894598 355 96 613 22
39863857 355 96 600 22
92722750 306 96 600 22
38008579/54639794 280 96 600 17
39863840 275 96 600 17
46853107 APL 135 302 / 1h
Centrifugal Oil Separator | Rotary Sokiro Compressor Accessories | Air Compressor Distributor
Previous: Mann Oil sivana
Manaraka: Atlas Copco Air Oil Separators
Abac hiantra Part
Air Compressor Sivanina Ary Separator
Almig hiantra Part
Alup hiantra Part
Atlas Copco Fikarakarana Kit
Atlas Copco Part hiantra
Boge hiantra Part
Chicago Pneumatic hiantra Part
Compair solika Separator
Compair Iantrao ny Part
Compressor Filter Ary Separator
Elgi solika Separator
Elgi hiantra Part
Filter Ary Separator Factory
Filter Ary Separator For Sale
Filter Ary Separator Manufacturer
Filter Ary Separator Supplier
Fusheng solika Separator
Fusheng hiantra Part
Gardner Denver Fikarakarana Kit
Gardner Denver hiantra Part
Hitachi hiantra Part
Ingesoll Rand Fikarakarana Kit
Ingesoll Rand solika Separator
Ingesoll Rand hiantra Part
Kaeser Fikarakarana Kit
Kaeser solika Separator
Kaeser hiantra Part
Kobelco solika Separator
Liutech solika Separator
Mitsui Seiki solika Separator
Mitsui Seiki hiantra Part
Quincy solika Separator
Sullair solika Separator
Worthington solika Separator
Sullair Air sivana
Atlas Copco Air sivana
Kobelco Oil sivana